Tilmaamaha Buuxda ee Qiimeynta IP-Biyo La'aanta - IP44, IP54, IP55, IP65, IP66, IPX4, IPX5, IPX7 Waxaa laga yaabaa inaad la kulantay alaab ay ku qoran yihiin calaamado dusha ka saaran ama ay ku jiraan baakidhkooda, sida IP44, IP54, IP55 ama kuwa la mid ah. Laakiin miyaad ogtahay waxa macnahoodu yahay? Hagaag, tani waa koodh caalami ah ...Akhri wax dheeraad ah »
Dhammaanteen waxaynu aragnaa tixraacyada aaladaha aan biyuhu karin, aaladaha u adkaysta biyaha iyo aaladaha biyaha celiya ee lagu tuurayo alaabada elektaroonigga ah. Su’aasha ugu weyn ayaa ah: Waa maxay farqiga u dhexeeya? Waxaa jira maqaallo badan oo ku qoran mowduucan, laakiin waxaan is tusnay inaan tuuri doonno labadayada sante sidoo kale ta ...Akhri wax dheeraad ah »
by admin on Agoosto-25-2020
Waa Maxay Gogosha Dabaqa? Godka sagxadda dhulku waa qaboojiye fur oo ku yaal dabaqa. Noocyada noocan ah waxaa loo samayn karaa fiilooyin fara badan oo kala duwan, laakiin badanaa waxaa loo isticmaalaa isku xidhka korontada, taleefanka, ama fiilooyinka. Isticmaalka saldhigyada dhulka waxaa si aad ah loogu nidaamiyaa xeerarka dhismaha dad badan ayaa ...Akhri wax dheeraad ah »